UKUVALWA KWESIKHUNGO SOKUBHALELA AMA-LEARNERS – SIVUBELAINTUTHUKO
UKUVALWA KWESIKHUNGO SOKUBHALELA AMA-LEARNERS
UMASIPALA wasOndini wazisa umphakathi ngokuvalwa kwesikhungo sokubhalela izincwadi zama – Learners. Lokhu kulandela isigameko esenzekile ngezikhathi zasekuseni namhlanje lapho umfundi obezovivinyelwa incwadi zokushayela wanyathela ngamandla wasuka enkundleni yokuvivinywa waze wayovinjwa yizindlu zokubhalela.
Kulesi sigameko kulimale isisebenzi sikaMasipala sishayiswa yileli loli obekuvivinywa ngalo lona. Umphakathi uyaziswa ukuthi okwamanje ngeke kubhaliselwe ukubhala izivivinyo ze-learners futhi azikho nezivivinyo ezizobhalwa ngenxa yalesi simo. Umphakathi uyanxuswa futhi ukuthi usibekezelele njengoba sisabhekene nalenkinga. Uzokwaziswa umphakathi uma sekulungile. Okunye kulesi sikhungo kuzoqhubeka.
UNgqongqoshe uKhoza nenhlabamkhosi kwelezidakamizwa
TSEPO MOLEFE UNGQONGQOSHE woMnnyango wokuThuthukiswa koMphakathi kwaZulu-Natal uNkk Nonhlanhla Khoza uhlabe ikhwele kwizakhamizi zesifundazwe ukubambisana naye ekulweni nesihlava sokusetshenziswa kwezidakamizwa okuthiwa ludla lubi entsheni emphakathini. UNkk Khoza uze nalenhlabamkhosi ehambele ehostela laseKK eClermont lapho abeqhuba khona umkhankaso wakhe wokuletha inhlalakahle emphakathini. Lapha uNkk Khoza ubephelezelwa ngamalungu ephalamende kuzwelonke uMnu Cyril Xaba ongowokuzalwa eClermont, uNkk Mina Lesoma, […]
Kunxuswa intsha ukungena emkhakheni wezolimo ukuphilisa isizwe
TSEPO MOTLOKOA KUKHUTHAZWA intsha yesifundazwe iKwaZulu-Natal ukusondelana nomkhakha wezolimo ngoba yiwona onamathuba amaningi ekuphileni kwabantu njengoba izinto eziningi ezidliwayo zidlula kokutshaliwe ukuze abantu baphile. Leli yikhwelo likaNkk Bongi Sithole-Moloi ophathiswe uMnyango wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya esifundazweni alihlabe emcimbini wokuthweswa kwemiyezane kubafundi abebefunda ezolimo e-Owen Sithole College of Agricultural eMpangeni. Lapha bekuklonyeliswa ngemiyezane abafundi abebenza ezolimo emikhakheni […]
Izinduna zinikele ngokudla entombazaneni ekhale ngendlala kwi-Facebook
TSEPO MOTLOKOA UPHENDUKE iqhawe u-Asibonge Zondi (12) wasePhayiphini KwaMpumuza onikele ekhasini le-Facebook elaziwa ngeSIFUNISANA UMSEBENZI ePIETERMARITZBURG enxusa kongaba nosizo ukubanikelela ngokudla ekhaya echaza nokuthi kabasenanina basele noyise owahlaselwa yisifo sohlangothi wayeka emsebenzini esekhubazekile. U-Asibonge uthe ekhaya bahlanu kuhlanganisa noyise uMnu Nkululeko Zondi (54) nezingane zakwabo bonke bathembele emalini yesibonelelo sakhe njengoba noyise impesheni yokugula kwakhe seyanqamuka. […]
OwokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal utusa osonhlalakahle